घुराइ बानी होइन, रोग | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← माउण्ट एभरेष्ट स्पोर्टिङ्ग क्लव एवं कुवेतनेपाल डटकमको “प्रेस बिज्ञप्ती”
कालीगण्डकी बचत समुहद्वारा आयोजित भलिवल प्रतियोगिता सम्पन्न: SDFC ले पुन. कब्जा जमायो →
Posted on 23/04/2011 by डम्बर 'माइला' | टिप्पणी छोड्नुहोस्
वैशाख १० – सुत्दा घुर्ने बानी छ ? घुर्दाघुर्दै सास रोकिनाले आत्तिएर ब्युँझने गर्नुभएको छ ? राति बारम्बार निद्रा खलबलिन्छ ? निद्रामा बर्बराउनुहुन्छ ? उत्तर सकारात्मक छ भने एकपटक चिकित्सक कहाँ गइहाल्नुस् । बढी घुर्नु आफैंमा एउटा रोग हो । ‘घुर्दा सास बन्द समेत हुन्छ, तर सास दस सेकेन्डभन्दा बढी रोकिनु असामान्य हो,’ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एन्ड स्लिप मेडिसिन कन्सलटेन्ट डा. रमेश चोखानी भन्छन्, ‘एक घन्टामा पाँचपटकभन्दा बढी समयसम्म सास रोकिने समस्या छ भने चिकित्सकीय सल्लाह आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार घुर्दा सास रोकिने समस्या देखिएकाहरूलाई मुटुको रोग, पक्षाघातको सम्भावना धेरै हुन्छ ।
अमेरिकन एकेडमी अफ ओटोल्यारेंगोलजी -हेड एन्ड नेक सर्जरी) को तथ्यपत्रअनुसार ४५ प्रतिशत सामान्य वयस्क व्यक्ति कहिलेकाहीँ घुर्ने गरेका छन् । २५ प्रतिशतलाई घुर्ने बानी हुन्छ । पुरुष र बढी तौल भएकाहरूमा यो समस्या उमेर सँगसँगै बढ्दै जान्छ ।
घुराइ श्वास-प्रश्वासका बेला सास रोकिने संकेत हुन सक्ने भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा भने लिनु हँुदैन । ‘घुरिरहेका व्यक्तिलाई गहिरो निद्रामा रहेको ठानिन्छ,’ डा. चोखानी भन्छन्, ‘तर घुर्नु राम्रो स्वास्थ्यको सूचक होइन ।’
घुर्ने बानी लागेकाहरूले राति राम्ररी निदाउन सक्तैनन्, फलस्वरूप उनीहरू दिनभरि सुस्त देखिन्छन् । हाल सास रोकिने समस्याको उपचार गराइरहेका काठमाडौंका एक व्यवसायी दुईपटक ब्यांकको चेकमा हस्ताक्षर गर्दागर्दै निदाएका थिए । घुराइका कारण निद्रामा अवरोधले गर्दा व्यक्तिको एकाग्रता भंग हुन्छ । यसले कार्यकुशलतामा नराम्रो प्रभाव पर्छ ।
निद्रामा सास अवरोधको शंका भए यसको पुष्टिका लागि चिकित्सकहरूले रोगीको निद्रासम्बन्धी अध्ययन गर्छन् । रोगी सुत्दाताका पोली सोनोग्राफी गरिन्छ । यसअन्तर्गत निदाएका बेला मस्तिष्कको गतिविधि, मुटुको गति, खुट्टाको सञ्चालन, अक्सिजनको स्तर तथा सास सञ्चालन ६ देखि ८ घन्टासम्म रेकर्ड गरिन्छ । विभिन्न संवेदकहरूका माध्यमले रोगीको मुटु, फोक्सो, रगतमा अक्सिजनको मात्रा लगायतका विभिन्न अंगको अनुगमन गरिन्छ ।
निद्रासम्बन्धी अध्ययनले रोगी घुर्छ मात्र र ऊ निदाएका बेला सास अवरोध धेरै कम हुने देखाए ऊ सास रोकिने रोगबाट पीडित मानिँदैन ।
रोगी बढी घुर्दैन भने उसलाई शरीरको तौल अलि कम गर्न सल्लाह दिइन्छ । साँझ रक्सी वा चुरोट नखान, नाक सम्भव भएसम्म सफा राख्न, कोल्टो सुत्न प्रेरित गरिन्छ । चिकित्सकले पहिले विभिन्न परीक्षणद्वारा घुर्ने कारण पत्ता लगाउँछन् । नाकमा मासु पलाउनु, नाकको पर्दा बांगो हुनु घुराइको कारण भए शल्यक्रियाको सुझाव समेत दिइन्छ ।
सास अवरोध हटाउन सी पैप मेसिन
‘कन्टिन्युअस पोजिटिभ एयर वे प्रेसर’ मेसिन सास अवरोधका सिकार भएकाहरूका लागि अत्यन्त उपयोगी मानिन्छ । यो मेसिनमा भएको ब्लोअर -हावा पmयाँक्ने) ले हावालाई लचिलो नलीको माध्यमले धकेल्छ । यो नली एउटा मास्कले जोडिएको हुन्छ, जसलाई तपाईंले सुत्दाताका नाक र मुखमा लगाउनुपर्छ ।
नलीको माध्यमले हुने हावाको निरन्तर प्रवाहले नाक र घाँटीको हावा आउने जाने बाटोलाई शिथिल हुन पाउँदैन । अनि सास पनि रोकिन्छ ।
‘सास अवरोध हुनेहरूले यो मेसिन उपयोग गरेपछि तिनको रक्तचाप सामान्य हुन्छ, मुटुको चाल सामान्य हुन्छ, निद्रा मजाले लाग्न थाल्छ,’ डा. चोखानी भन्छन्, ‘यसपछि रोगीहरू आफूलाई युवा र इनर्जेटिक अनुभव गर्छन्, सास रोकिनाले हुने समस्याबाट जोगिन सक्छन् ।’